मरेको २७ दिनपछि हिँड्दै घर पुगेपछि...
एजेन्सी | कात्तिक २१, २०७६ बिहिबार | 0
नीतू आफ्नो घर देखी हराइन् । परिवारले प्रहरीमा निवेदन दिए । प्रहरीले निताको श्रीमान् राम लखन माथि शङ्का गर्‍यो । पछि प्रहरीले राम लखनलाई दोषी पाएन । नीतूको परिवारलाई एउटा मृत शरीर देखाए जुन नोयडाको सेक्टर ११५ मा भेटेका थिए जसको शरीर पुरै डढेको थियो । परिवारलाई उक्त शरीर नीतूको जस्तोलागेको थियो । प्रहरीले डीएनए स्याम्पल नजाँची सहजै सो शव दिएको थियो । परिवारले अन्तिम संस्कार गरेको थियो । तै पनि प्रहरीले सत्य पत्ता लगाउन घटनाको अनुसन्धान गरिरह्यो ।
यो देशमा अचानक आकाश रातो भएपछि...
पार्कमा आगो लाग्यो : बोटविरुवा जेलनन् बरु पलाए! कसरी भयो चमत्कार?
आफूभन्दा ६ वर्ष कान्छो युवासँग आमाको अफेयर चलेपछि नेयमारले यसो भने